Ukugunda Izimbuzi ze-Angora
Shearing of Angora Goats
©Mohair South Africa
Izimbuzi ze-Angora zingadliwa njalo ezinyangeni eziyisithupha. Isisindo somthwalo siyahlukahluka ngobudala - kusuka ku-500g kusuka ezinganeni kuya ku-2 kg wezinwele ezimbuzi ezikhulile. Uboya bubizwa ngokuthi i-mohair, hhayi i-angora. U-Angora uvela ezinogwaja ze-Angora.
Imbuzi ehlanzekile ikwazi ukushefa kunomuntu ongcolile.
Imbuzi kumele ibe eyomile.
Ukuchofoza kulula kunezingubo, ikakhulukazi oqalayo.
Ungayinqamu indawo efanayo kabili, njengoba ubude be-fiber ubude buhlinzeka ngezinga eliphakeme lekhwalithi.
Uma kungavunywanga ngaso sonke isikhathi, izimbuzi ze-Angora zitholakale ezigulini nezifo. Izinwele ezinde zingase futhi zikhawulele ukubona nokunyakaza, okungavimbela imbuzi ukuba idle futhi iphuze. Kungase futhi kuphazamise izingane zezimbuzi kusukela ekuncelisayo.
Ukuphatha Izimbuzi ze-Angora
Uma ugwasa izimbuzi ze-Angora, kumele ziphathwe ngesineke futhi zivumele ukuziphatha kwazo kwemvelo - zihlakaniphile futhi zihlakaniphile. Ukugcoba kuphazamiseka kwezimbuzi nokuphatha ngokungafanele izimbuzi kufanele kugwenywe. Izimbuzi zingabanjwa ngaphezu kwesithende noma uphondo, kuye ngokuthi ubudala babo kodwa akufanele neze zihudulwe yimilenze yazo. Ungasebenzisi abasebenzayo kagesi ngezimbuzi.
Izimbuzi kufanele zifakwe kusekelwa noma zisekele emilenzeni yakho. Ukugcoba kufanele kuqale ngemuva kokugcina futhi uqhubeke phambili. Hamba kancane futhi ugcobe eduze komzimba wezimbuzi.
Ukuhlanzeka Ngesikhathi Sokugunda
Ukuvimbela ukuhanjiswa kwezifo kubaluleke kakhulu ngesikhathi sokugqoka. Imishini yokugqoka kanye nabagibeli (isandla noma abakhi bemishini) bangasakaza izifo ezithathelwanayo emhlambini noma emkhatsini wezimvu, ngakho-ke izinqubo ezifanele zokuvimbela i-disinfection kumele zilandelwe. Qala ukugqoka izimbuzi ezincane kuqala ukuvimbela ukudluliswa kwesifo kusuka ezilwaneni ezindala.
Ngaphambi kokugqoka ukuqala ukukhipha izimpahla kufanele kuhlanzwe futhi kuhlungwe i-disinfected. Ngemuva kokuqedwa kwezimpahla, wonke ama-mohair kufanele ahlelwe, alayishwe futhi asuswe egazini futhi asuse imishini yokugcoba. Izimpahla zokugcoba kumele zifakwe i-disinfected ngezikhathi ezithile ngesikhathi sokugqoka ukuyeka ukusabalala kwezifo.
Uma umsizi enqamule i-abscess ngembuzi, u-shearer kufanele ashintshe abe yi-pair of trousers ehlanzekile. Indawo yokugcoba kufanele futhi ikhutshazwe i-disinfected.
Izilwane ezifile akufanele zikhishwe ngesikhumba sokugcoba futhi izilwane ezigulayo akufanele zihlale endaweni yokugcoba. Amachibi namaphilisi akufanele aphathwe, omisiwe noma agcinwe emanzini okugcoba.
Ukugqoka kumele kube kuhle ngabakhwali bezimvume. Qinisekisa ukuthi ukusika ukugcoba kuphethwe nge-disinfactant kanye namafutha aphikisayo anamafutha okuvimbela ukutheleleka. Izimbuzi kufanele zithole ukudla namanzi amasha ngokushesha ngemuva kokugqoka.
Qaphela ukuba ungabonakali izimbuzi ezidakiwe ukuze kube nezimo zezulu ezimbi ezifana nesimo sezulu esibanda futhi semanzi. Qinisekisa ukuthi banendawo yokukhosela futhi engeza ukudla okuphezulu kwamandla kwimiklomelo yabo.